Sawirrada wajiga carruurta
Yaa carruurtaada jecel inay iska dhigaan? Ma waxaad la xiriirtay mermaid maanta? Oo laga yaabo, ka buste hoostiisa waxaad ku qurxisay qaboojiye? Kadib waxaad xaqiiqda u baahan tahay inaad ka caawiso caruurtu inay noqdaan geesiyaal ay jecel yihiin. Sidee loo sameeyaa tan? Aad u fudud iyo madadaalo. Maanta waxaa jira hab cajiib ah sida madadaalada sida aqua-grim ee wajiga carruurta. Maxay tahay iyo sida loo sameeyo naftaada? Waan ka wada hadli doonnaa tan si faahfaahsan iyo farxad.
Sidee loo sawiraa rinjiga wajiga?
Si aad u bilawdo, waxaa habboon in la xuso faa'iidooyinka casharka noocan oo kale ah sida rinjiyeynta wajiga. Carruurta, hiwaayaddaani waa, ugu horreyntii, ka saarista cadaadiska jirka iyo maskaxda. Sawirka uu ilmuhu qaato, si uu u eego muuqaalkiisa cusub wuxuu ka caawiyaa in uu carqaladeeyo oo si fiican u kiciyo niyadda. Haddii aad leedahay fasax la qorsheeyey ama aad rabto in aad ku raali geliso ilmaha, waxaad samayn kartaa biyo-qabasho gacmahaaga ah. Ka dibna ma joojin doontid hawsha si aad uhesho waxqabadkaas oo ka caawi ilmaha inuu bedelo muuqaalkiisa.
Isla markiiba waxaan qeexaynaa, intii laga yaabo inay suurtogal noqoto in wejiga la saaro, iyo waxa ka wanaagsan in aan gacmaha la galin. Rinjiyeyn kasta ma ku habboon yahay maqaarka cunugaaga. Aqua-grime Classic waxaa lagu daboolaa midabada biyaha ku salaysan ama budada qallalan, taas oo lagu qasi karo biyo. Dukaamada qaarkooda gaarka ah ayaa la iibiyaa. Waxa kale oo fiican in sawir la sawiro. Si kastaba ha ahaatee, ha isticmaalin rinjiga biyaha. Walxaha ku jira iyaga waxay keeni karaan xasaasiyad alerjiga maqaarka ilmaha. Dabiiciga, saliida, rinjiga, roogga, iyo xargaha sidoo kale lama hadli karo.
Boorsooyinka loogu talagalay aqua-grime gacmahooda
Haddii dukaamada maxaliga ah, cidna ma ogaan karto waxa midabada ku rinjinaya wajigaaga, waxaad ku sameyn kartaa guriga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa:
kareem kasta oo qoyan (oo la heli karo maqaarka ilmaha ee xasaasiga ah);
Cuntada ayaa lafteedu u egtahay sidan oo kale:
In galaaska ku rid 3 tbsp. l. istaarijin, 1 tsp. biyaha iyo 1 tsp. kareemka. Diyaarso midabada cunnada ee midabka la rabo.
Isku dar isku dar ah galaas, ku dar hal dhibic oo dheeh leh. Si aad u farageliso, markaa, waa lagamamaarmaan yahay illaa inta ay muhiimka u tahay midabka.
Rinjiga waa in lagu daboolaa buraashka quruxda badan iyo buraashka lagu sawirayo.
Haddii guriga uu leeyahay birjoog ka soo jeeda dhalo khamri ah (geedka digaagga ee dabiiciga ah), ka dibna si aad u hesho midab madow, waxaad dabka ka saari kartaa geeska koofiyadan, xoqin keegga iyo buraashka qoyan ee lagu rusheeyey budada keentay.
Marka, marka maaddadu diyaar u tahay, waa waqtigii lagu go'aansan lahaa sawirada wejiga wajiga u noqon doona carruurta ugu xiisaha badan, iyo dadka qaangaarka ah ee fudud ee waxqabadka.
Sidee loo sawiraa sawirrada wajiga?
Habka sawirku wuxuu ku xiran yahay maskaxda waalidka iyo rabitaanka ilmaha. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo xaqiiqda ah in sawirrada wajiga ah ee wiilasha iyo gabdhuhu ay kala duwan yihiin, dhammaantood waxay leeyihiin hal asaasi waxayna u baahan yihiin farsamo gaar ah oo hirgelin ah. Waxay ku dhacaysaa dhowr marxaladood:
1. Diyaarinta alaabta lagama maarmaanka ah:
cadayashada sawir (laba dhuuban iyo labo khafiif ah);
waa nooc sir ah oo suufka ah ama isbuunyo si loogu isticmaalo codka wajiga.
2. Xaqiiji in rinjiga aad dooratay uusan u keenin xasaasiyad jirka ah ee maqaarka ilmaha. Qaado qadar yar oo ah walaxda maqaarka oo sug. Mararka qaarkood waxay qaadataa saacad si ay u horumariso falcelinta.
3. Timaha ka saar wejiga si aysan u faragalin oo u gelin dharka ilmaha, taas oo ah mid aan naxariis lahayn in lagu rido ranjiga (inkastoo sida caadiga ah aqua-grime si fudud loo dhaqo biyo saabuun leh saabuun diiran).
4. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad bilawdo sawir waa qadarka codka. Waa in si siman loo qaybiyo wejiga oo uu yeesho dusha si siman. Si tan loo sameeyo, qoyaan uumiga biyaha, dabka rinjiga iyo si khafiif ah, dhaqdhaqaaqa gaaban, codso wejiga. Si taxadar leh u dheji daboolka agagaarka indhaha, sanka iyo dibnaha. Sii wax yar oo qallalan (mararka qaarkood rinjiga ayaa ku dhimi kara hoose).
5. Marka xigta waxay timaaddaa shaqada ugu adag - sawir yar oo faahfaahin yar, faallooyin iyo stroke. Kuwa bilowga ah, waxaad yeelan kartaa sawir kaas oo sawir sawir leh. Rinjiyeynta burushka waa in lagu qoraa qulqulka wareegga oo kaliya oo ka sarreeya cadayada. Rinjiga laftiisa waa inuu ahaadaa mid caan ah, taas oo ah, ha ku ridin oo ha faafin. Aquagrim waa in lagu dabaqo xagasha toosan wajiga ilmaha. Si aad u hesho dhibic, waxaad u baahan tahay kaliya inaad taabato wejiga caarada caarada burushka.
Xusuusnow in ilmuhu yahay nooca ugu adag. Ma fariisan doono waqti dheer hal meel, sidaas darteed shaqada oo dhan waa in si degdeg ah loo sameeyaa. Ha iloobin in buraashu ay sababi karto kicinta ama qosolka, taas oo, dabcan, saamayn ku yeelan doonta sawirka. U diyaari ilmaha horey u socodka hibada yar. Isku shaandhee kartuunada ama ku mashquulin wadahadalka. Natiijadu ma noqon doonto mid dheer oo soo socota. Sawir qurux badan wakhti dheer ayaa ku siin doona niyadda cunuggaaga oo ka tago waxyaabo badan oo riyooyin ah.
Saaxiibka gabar loogu talagalay Sannadka Cusub
Sidee loo baraa ilmo inuu ku soo galo 3 sano?
Xeerarka biyaha ee carruurta
Sidee loo dhejiyaa suufka caaga ah?
Sidee u ilaawi kartaa ilmo inuu ku dhaariyo saaxiibkiisa?
Sidee loo bixiyaa xanaanada cunugga ee isbitaalku?
Maxay tahay in cunuggu yaqaano marka uu tagayo fasalka kowaad?
SDA loogu talagalay ardayda dugsiga dhigata
Dib u eegista buugga "Safar Aan Sameynin Adduunka Xayawaanka: Raadinta Raadinta Adduunka oo dhan", Anna Kleiburn, Kearney Brendan
Bouquet xilliga dayrta ee xanaanada
Koritaanka ilmaha - 4 sano
Ciyaarta Didactic "Yaa ku nool meesha?"
Sidee loo qabtaa jiilaalka?
Port of Old Tel Aviv
Maxaa la xirxiray surwaalka midabka?
Jam oo ka timaada feijoa aan karin
Kabaha xagaaga - moodooyinka ugu quruxda badan iyo kuwa raaxo leh ee qaanso-dhaliye ah
Dawooyinka Antihelminthic ee carruurta
Tuubka ayaa dhaawacaya toddobaad ka hor bil kasta
Dib u soo noqoshada "samatabbixiyeyaasha Malibu" waa wax aan suurtagal ahayn iyada oo aan qurux badneyn Pamela Anderson!
Jir-jarjir leh jar ka jar hore
Dhibaatooyinka ka dib ifilada
Tijaabooyinkee ayaa ugu fiican ilkaha?
Miyaan uur yeelan karaa galmada dabada?
Jarida maqaarka faraha
Chewingbaks oo laga sameeyey rooti pita
Matxafka Ololaha (Lillehammer)
Uurka 13 toddobaad - horumarinta ilmaha caloosha
Kate Middleton ayaa ku soo bandhigtay hadal taabasho ah kulan ay la yeesheen bukaanka bukaanka ee carruurta